ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစောင် ၃၆ – The Believer’s Bible Commentary – Myanmar
(ထ) ယောခတ်မင်း (၃၆:၁–၃)
၃၆:၁–၃ ယုဒလူများသည် အလီလီ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ခံကြသည်။ ဘီစီ ၆၀၅ခုနှစ်တွင် နေဗုခဒ်နေဇာဘုရင်က ယေရှုရှလင်မြို့ကို စီးနင်း၍ ယောယကိမ်အား ဗာဗုလုန်သို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသည်။ ဒံယေလကလည်း အဆစ်ပါသွားသည်(၄ရာ ၂၄:၁)။တဖန်ဘီစီ ၅၉၇ခုနှစ်တွင် ယေရှုရှလင်အား ချေမှုန်းပြီး ယေဟောချိန်မင်းအား ဖမ်းဆီးသည်။ ထိုအခေါက်တွင် ပရောဖက်ယေဇကျေလ ပါသွားသည်။ (၄ရာ ၂၄:၁၀)။ နောက်ဆုံးခေါက်ဘီစီ ၅၈၆တွင် နေဗုခဒ်နေဇာမင်းသည် ယေရှုရှလင်ဗိမာန်တော်ပါ ဖျက်စီးပစ်၍ အိုနာကျိုးကန်းများမှအပ ကျန်းမာသန်စွမ်းသူ လူအားလုံးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် သွားသည် (၄ရာ ၂၅:၁-၁၀)။
ယောခတ်မင်းသည် ဖင်ပူအောင်နန်းမထိုင် လိုက်ရပါ။ (၃)လသာ နန်းစံသည်။ အဲဂုတ္တုဘုရင်က နန်းချသည့်အပြင် စစ်လျော်ကြေး မတန်မဆ တောင်းဆိုလိုက်သေးသည်။ ယောခန်မင်းသည် ဖခင်ယောရှိမင်း၏ ခြေဖျားမမှီ။ ဖခင်၏လုပ်ဆောင် ချက်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ဆိုးသွမ်းမိုက်ကန်းဟော့ရမ်းသည် (၄ရာ ၂၃:၃၁-၃၄ နှင့်ယှဉ်ဖတ်မပါ)။ အဲဂုတ္တုပြည်သို့ ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီး ထိုပြည်တွင် နတ်ရွာစံသည်။
၃၆:၄–၈ ယောယကိမ်(သို့) လျောကိမ်မင်းသည် ယောခတ်မင်း၏ အစ်ကို ဖြစ်သည်။ အဲဂုတ္တူဘုရင်နေဇာမင်း၏ နန်းတင်ပေးခြင်းဖြင့် ဘုရင်ဖြစ်လာသည်။ (၁)နှစ်လုံးလုံး မင်းဆိုးမင်းညစ် ယုဒဘုရင်အဖြစ် နန်းစံသည်။ ဘီစီ ၆၀၅ ခုနှစ်တွင် နေဗုခဒ်နေဇာဘုရင်က ရာဇပလ္လင်ဆုံးခန်းတိုင်စေသည်။ ဗာဗုလုန်သို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားသော်လည်း မကွပ်မျက်။ ရာဇဝင်ချုပ်တွင် ရေးမှတ်ခြင်းမပြုသော်လည်း ယေရှုရှလင်ပျက်သုဉ်းချိန်ထိ အသက်ရှင်နေသေးကြောင်း ယေရမိ၏ ပရောဖက်ပြုချက်အရ နားလည်ရသည် (ယေ ၂၂:၁၉၊ ၃၆:၃၀ နှင့် ယှဉ်ဖတ်ပါ)။
၃၆:၉–၁၀ ယောယချိန်(သို့) ယေခေါနိမင်း နန်းတက်ချိန်တွင် အသက်(၁၈)နှစ်ရှိသည် (NKJV Marg)။
၃လနှင့်၁၀ရက်သာ နန်းထိုင်ရပြီး၊ ကျန်ရှိသော အသက်(၃၇)နှစ်သည် ဗာဗုလုန်တွင် ထောင်နန်းစံရသည်။ ဗာဗုလုန်ဘုရင်နေဗုခဒ် နေဇာကွယ်လွန်သွားသောအခါ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိသွားသည် (၄ရာ ၂၅:၂၇-၃၀)။
၃၆:၁၁–၁၉ ယောရှိ၏သားဇေကိမင်း၏ အခြားနာမည်မှာမဿနိ(Mattanish) ဖြစ်သည်။ ယေဟောချိန်လက်ထောက် ဇေနကိကား နန်းတင်ထားခဲ့သည်။ ထိုမင်းသည်လည်း ဒုစရိုက်၏သားကောင်ဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ယေရမိ၏ အကြံပေးချက်များကိုလည်း နားမထောင် ငြင်းပယ်သည်။ နေဗုခဒ်နေဇာကို ပြုထားသော ကတိကိုလည်း ​ဖောက်ဖျက်၍ ပုန်ကန်ခြားနားသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုရှလင်သားများသည် ထိုမင်းဆိုးလက်အောက်တွင် (၁၈)လလုံးလုံး ရင်တမမဖြင့် အသက်ကို ရဲရဲမရှုဝံ့ပါ။ ဘီစီ ၅၈၆ ခုနှစ်တွင် ဒါလဒဲ (ဗာဗုလုန်)များ ဝင်ရောက်၍ မြို့တော်နှင့်တကွ ဗိမာန်တော်ပါ ဖျက်သိမ်းကြသောအခါ ယုဒဘုရင် ဇာတ်လုံးပြည်ဖုံးကားချရတော့သည်။ အိုနာကျိုးကန်း ဂီလာနများမှအပ ဗာဗုလုန်သို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကြသည်။
၄။ဗာဗုလုန်သို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်း(၃၆:၂၀– ၂၁)
၃၆:၂၀–၂၁ ယုဒလူများသည်နှစ်ပေါင်း (၄၉၀)လုံးလုံး ဥပုသ်နေ့မစောင့်မထိန်းကြ။ ယခုနှစ်ပေါင်း(၇၀) ဥပုသ်စောင့်ထိန်းရန် အကြောင်းဖန်လာသည်။ နှစ်ပေါင်း(၇၀) ဖမ်းဆီးကျွန်ပြုခံရခြင်း အကြောင်းအရာများကို ဧဇရမှတ်စာနိဒါန်းတွင် ရှင်းပြထားသည်။
၅။ ကုရုမင်းအမိန့် (၃၆:၂၂–၂၃)
၃၆:၂၂–၂၃ ယုဒလူတို့ ဗာဗုလန်တွင် ကျွန်ပြုခံနေကြစဉ်တွင် ဗာဗုလန်ပြည်ကို မေနိ−ပါရှားမင်းက တိုက်ခိုက်အောင်မြင်သည်။ နှစ်ပေါင်း(၇၀)ကြာ ကျွန်ခံကြပြီးနောက် ပါရှားဘုရင်ကုရုမင်းက ယုဒလူများအား နေရပ်ပြန်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။
ဟေဗြဲကျမ်းတွင် ရာဇဝင်ချုပ်သည် နောက်ပိတ်ဆုံးကျမ်းစောင်ဖြစ်သည်။ (မာလ ၄:၆)တွင်ပါရှိသည့် အတိုင်းကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာဖြင့် အဆုံးမသတ်ဘဲ ဇာတ်သိမ်းခန်းလှသွားသည်။
ထို့ကြောင့် ပါရှားဘုရင်မင်းသည် ယုဒလူများအတွက် ဘုရာသခင် စေလွှတ်သောဘုရင်ဖြစ်၍ လောကဘုရင်များတွင် အကြီးမြတ်ဆုံး ဖြစ်သည်ဟု အမွှမ်းတင်ကြသည်။ ယုဒပြည် ယေရှုရှလင်တွင်လည်း ဗိမာန်တော်ပြန်တည်ဆောက်ကြရန် တိုက်တွန်းအားပေးသည်။ ဘုရားသခင်၏ လူများအလယ်မှ လူသားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကုရုမင်းနှင့် အတူရှိတော်မှုသောကြောင့် ယုဒလူများ ဇာတိချက်ကြွေမွေးရပ်မြေသို့ ပြန်လည်ခြေချခွင့် ရရှိကြသည်။
၁(၂:၃-၁၀ ရှောလမုန်မင်းက ဟိရံမင်းထံသို့မည်ရွေ့ မည်မျှပေးခဲ့သနည်း။ ၃ရာ ၅:၁၁တွင်တမျိုးဖြစ်၍ ၆ရာ ၂:၁၀တွင် တမျိုးပြသည်။၃ရာသည် ပုဂ္ဂိုလ်ရေ:အရ ဟိရ့မင်းအိမ်ထောင်မိသားစုသို့ ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်၍ ၆ရာ ၂:၁၀ သည် ထင်းခုတ်သမားများသို့ လက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
၂(၂:၁၁-၁၆) ဟုရံ(Huram)၏မိခင်သည် မည်သူနည်း။ ၆ရာ ၂:၁၄တွင် ဒန်အမျိုးမှ မုဆိုးမဟု ဆိုသည်။ ပထမယောင်္ကျားသည် နဿလိအမျိုးဖြစ်၍ သူမသည် ဒန်လူမျိုးဖြစ်ပေမည်။ ပထမလင်သေသောကြောင့် တုရုအမျိုးနှင့်နောက်အိမ်ထောင်ပြုပြီးဖြစ်သည်။
၃(၂:၁၇-၁၈) ဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ရာတွင် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူဦးရေများပြားလှသည်။ ၂:၁၈ တွင် ၃၆၀၀ ဦးဟုဆို၍ ၃ရာ ၅:၁၆ တွင် ၃၃၀၀ဟုဆိုသည်။ ဤအရေအတွက်ကိန်းဂဏန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက် စဉ်းစားစရာရှိသည်။ ၆ရာ ၈:၁၀တွင် ရှောလမုန်မင်းက လုပ်ငန်းကြီးကွပ်ကဲရန် အရာရှိမင်း(၂၅၀) ခန့်အပ်သည်ဟု ဆိုပြန်ပေသည်။ ၂:၁၈တွင်ပါရှိသော ၃၆၀၀နှင့်ထပ်ပေါင်းလျှင် ၃၈၅၀ရှိသည်။ ၃ရာ၉:၂၃ တွင် ရှောလမုန်မင်း၏ အရာရှိမင်း၊မှူးကြီးမတ်ရာပမာဏကို ၅၅၀ ဟုဆိုထားပြန်ပေသည်။ ၃ရာ၅:၁၆ တွင်ပါရှိသည့် ၃၃၀၀နှင့်ထပ်ပေါင်းလျှင် ၃၈၅၀ရှိသည်။ ထိုကြောင့်အရာရှိမင်းများနှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူ စုစုပေါင်းသည် အတူတူဖြစ်သည်။ အပေါ်ပြည့်လျှင် မတူညီသော်လည်း သေချာစီစစ်လျှင် အတူတူဖြစ်သည်။ အရာရှိမင်းများဆိုသည်မှာ စစ်ဘက်နယ်ဘက် အရာရှိများ ဖြစ်နိုင်သည်။ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲသူများမှာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များဖြစ်သည်။
၄(၃:၁- ၄)ဆင်ဝင်၏အမြင့်သည် ၃:၄တွင် ၁၂၀တောင်ဟုဆို၍ ၃ရာ ၇:၁၅ နှင့် ယေ ၅၂:၂၁တွင် ၁၈တောင်ဟုဆိုထားသည်။ ၃ရာ၇တွင်ပါရှိသည့် အမြင့်သည် တိုင်၏အမြင့်ဖြစ်၍ အငယ်၁၅တွင် ၃၅တောင်ဟု ရှင်းပြထားသည်။ တနည်းအားဖြင့် တိုင်အမြင့်သည် ၃၅ပေရှည်သည်။ ၁၈တောင်ရှိသောတိုင်နှစ်တိုင် ဆက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် (၃၆)တောင်ရှည်၍ ဆက်ထားသောနေရာ (၁)ဆတောင်နှုတ်လျှင် (၃၅)တောင်အသားတင်ကျန်နေသည်။
၆(၄:၁-၂၂) ၄:၂ တွင်ပါရှိသည့် အင်တုံ၏အရွယ်ပမာဏသည် တခါတရံ သမ္မာကျမ်းစာ ကူးယူသူများ၏ အမှားအယွင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုအရွယ်အစားကို အတောင် (၃၀) (သို့) ၅၄၀ လက်မအစား ထောင့်ဖြတ်အချင်း ၁၈၀ လက်မဟု မှတ်ယူရသည်။ ရှင်းပြရန် ခက်ခဲသောအချက်မှာ အထူ ၄လက်မဖြစ်သည်။ ငယ်၂တွင် အပြင်ဖက်အချင်းအရွယ်အစား ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ အတွင်းပိုင်းသည် အထူနှစ်ဖက်၈လက်မနုတ်ပါက ၁၇၂လက်မ အချင်းရှိမည်။ ထိုအချင်းပမာဏကို Pi တန်ဖိုး = ၃.၁၄ နှင့်မြှောက်၍ တွက်ချက်လျှင် ကျမ်းချက်ပါရှိသည့်အတိုင်း အဝန်းအတောင် (၃၀)နီးပါးရရှိသည်။
ထိုအင်တုံတွင် ရေပမာဏမည်မျှကာသနည်း။ ၃ရာ ၇:၂၆ တွင် ရေဗတ် (၂၀၀၀)ဟုဆို၍ ၄:၅ တွင် ရေဗတ်(၃၀၀၀)ဟုဆိုပြန်သည်။ နှစ်ထောင်သည် သာမန်ပုံမှန်ပမာဏဖြစ်၍ အပြည့်အလျှံထည့်လျှင် သုံးထောင်ဆန့်ပါသည်။
၇(၇:၁၁-၁၆) J.Barton.Payne,”ရာဇဝင်ချုပ်ဒုတိယစာစောင်”The Wyaliffe Bible Commentary p.397.
၈(၈:၇-၁၀) ရှောလမုန်ဘုရင်၏ အရာရှိမင်းများသည် များပြားလှသည်။ ၈:၁၀တွင် (၂၅၀)ဦးဟုဆို၍ ၃ရာ ၉:၂၃တွင် (၅၅၀)ဦးဟုဆိုသည်။ ၆ရာ ၂:၁၇-၁၈ မှတ်စုကို ကြည့်ပါ။
၉(၈:၇-၁၈)ရှောလမုန်သည် သြဖိရထံမှရွှေစင် အကျပ်၄၅၀ရရှိသည်ဟု ၈:၁၈တွင်ဆို၍ ၃ရာ ၉:၂၈တွင် အကျပ်၄၂၀ဟုဆိုသည်။ ဟေဗြဲကိန်း ဂဏန်း၂နှင့်၅သည် မှားယွင်းရန် လွယ်ကူသော ဂဏန်းဖြစ်၍ စာကူးယူသူများသူများ၏ မှားယွင်းချက်ဖြစ်သည်။ အချို့ကမှု ထိုကိန်းဂဏန်းကွာခြားချက် အကျပ်၃၀သည် စာရင်းမဝင် အပိုဆောင်းမုန့်ဖိုး ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုကြသည်။
၁၀(၉:၁၃-၂၈)တာရှုအရပ်သည် ဓါတ်သတ္တုပေါများသော အရပ်ဒေသအဖြစ် ဓမ္မဟောင်းကာလ၌ လူသိများထင်ရှားသည်။ ကျမ်းတတ်ပညာရှင်အများစုကမှု ယခုခေတ်ကာလ စပိန်ပြည်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ငွေ၊ ကြေး၊ ခဲ (The Revell Bible Dictionary, p.1136) ကြွယ်ဝသော တိုင်းပြည်ဖြစ်သည်။ “တာရှုသင်္ဘာများ”ဆိုသည်မှာ လူစီးသ​ မဟုတ်ဘဲ၊ပင်လယ်ကူးကုန်တင် သ ကြီးများဖြစ်သည်။
၁၁(၉:၁၃-၂၈) ရှောလမုန်မင်းတွင် မြင်းဇောင်း(၄၀၀၀) (ငယ် ၂၅)ဟုဆို၍ ၃ရာ ၄:၂၆ တွင် (၄၀၀၀၀)ဟုဆိုထားသည်။ NASB ကျမ်းမှုတွင်၃ရာ ၄:၂၆ပါ ၄၀၀၀ကို အတည်ယူရသည်ဟုဆိုသည်။ မြင်းစစ်သည်တော် တစ်သောင်းနှစ်ထောင်သာရှိသဖြင့် ဓမ္မရာဇဝင်တတိယစာစောင်မှ အရေအတွက်မှားယွင်းကူးယူခြင်း ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။
၁၂(၁၀:၁၂-၁၉)George Willians, The Student’s Commentary on the Holy Seriptures, p.246.
၁၃(၁၂:၉-၁၂) ကျမ်းတတ်ပညာရှင် အများစုက ရွှေစင်ကို ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုး၊ ကြေးဝါကို (KJV Brass)တရားစီရင်ခြင်း အမှတ်လက္ခဏာအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ကောက်တတ်ကြသည်။
၁၄(၁၃:၁-၃) အဘိယ၏ မယ်တော်မာခါကို ၁၃:၂တွင် သြရေလ၏သမီးဟုဆိုသည်။ ၆ရာ ၁၁:၂၀ တွင် မာခါသည် အဗရှလုံ၏ သမီးဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ယုဒသမိုင်းပညာရှင် Flavius Josephus ကသြရေလသည် အဗရှလုံ၏ သားမက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ မိခါ (သို့) မာခါနှင့် မာခါ၏ ဖခင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ မိခါနှင့် မာခါသည် တဦးဖြစ်သည်။ သို့ဖြင့် သြရေလ၏ သမီးမိခါသည် အဗရှေလုံ၏မြေးဖြစ်သည်။ (ဟေဗြဲဘာသာတွင် မြေး၊မြစ်များကိုလည်း သားသမီးဟု ဆက်ခေါ်လေ့ရှိသည်။)
၁၅(၁၄:၃-၈)၆ရာ၁၄:၃နှင့် ၁၄:၅ တွင် အာသမင်းက ကုန်းမြင့်ပေါ်ရှိ ဘုရားတုရုပ်တုများ ဖယ်ရှားသည်ဟုဆိုသော်လည်း ၁၅:၁၇ တွင် တမျိုးဆိုပြန်သည်။ မည့်သည့်အချက်ကို အမှန်ယူရမည်နည်း။ နှစ်ခုစလုံးမှန်ပါသည်။ အချို့တောင်ကုန်းဘုရားများသည် ဘုရားတုများဖြစ်၍ အချို့တောင်ကုန်းများသည် ယေဟောဝါဘုရားအတွက် ဖြစ်သည် (ဥပမာ ၃ရာ ၃:၂ကိုကြည့်)။ အချို့ကျမ်းစာ ပညာရှင်များက ရုပ်တုတည်ရာများကိုသာ ဖျက်ဆီးသည်ဟုဆိုကြသည်။
Keil ကမှု ဒုတိယကျမ်းပိုဒ်ကိုလက်ခံသည်။ အကုန်လုံးဖျက်ဆီးခြင်းမပြုဟု ဆိုသည်။ Rawlinson ကထိုအချိန်ကာလ နှစ်ခုသည် အတော်အတန် ကွာခြားသည်ဟု ယုံကြည်သည်။ အာသမင်းသည် နန်းတက်ခါစပိုင်းတွင် ရုပ်တုဘုရားတုဟူသမျှ ဖျက်သိမ်းသည်။ သို့သော် အနယ်ထိုင်လာသောအခါ ကြီးပေါကြောင်ဖြစ်လာသည်။ ဘုရားသခင်ကို မေ့လျော့ပြီး ဘုရားတုနောက်သို့ သမင်လည်ပြန်သည်။ John Haley ၏Alleged Discrepancies of the Bible, p.323 ကိုကြည့်။
၁၆(၁၅:၁၆-၁၉) ဟေဗြဲဝေါဟာရတွင် မိခင်သည် အဘွားလည်းဖြစ်နိုင်သည်။
၁၇(၁၆:၁) ၃ရာ ၁၅:၃၃ တွင် မြောက်ပိုင်းဣသရေလတတိယဘုရင် ဗာရှာသည် အာသမင်း နန်းစံ(၂၇)နှစ်အရွယ်တွင် ကွယ်လွန်သည်ဟုဆိုသည်။ ၆ရာ ၁၅:၁၆-၁ တွင် ဗာရှာနှင့်အာသမင်း (၃၆)နှစ်တွင် စစ်ခင်းကြသည်ဟုဆိုသည်။ ဟေဗြဲရာဇဝင်ပညာရှင် Thiele ကဤနေရာတွင် ယုဒဘုရင်၏ နန်းစံသက်ကို ရေတါက်ခြင်း မဟုတ်။ ယုဒနိုင်ငံတော် (၃၅)နှစ်အကြာ၊ ယေရောဗောင်မင်းကပုန်ကန်အာသမင်း၏ နန်းစံသက် (၂၅)နှစ်ဖြစ်သည်ဟု ရှင်းပြုထားသည်။ ထိုရှင်းပြချက်သည် မေးခွန်းထောက်စရာမရှိအောင် လုံလောက်ပါသည်။ အချိုကမှု ကျမ်းစာကူးယူရာတွင် မှားယွင်းခြင်းဖြစ်မည်ဟု ထင်ကြသည်။
၁၈(၁၈:၈-၁၁) D.L.Moody, Notes from Bible,p.59.
၁၉(၁၈:၁၈-၂၂) Matthew Henry,’ I kings.” Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible,II :703.
၂၀(၂၀:၁-၆)ဟေဗြဲဝေါဟာရSyria သည်Edom နှင့်ဆင်တူလွန်းသည်။ စာကူးယူသူ၏ မှားယွင်းကူးယူချက်ဖြစ်သည်။
၂၁(၂၂:၁-၉) Masoretee ကျမ်းမှု၆ရာ ၂၂:၂တွင် အဟိယမင်းသည် အသက် (၄၂)နှစ်အရွယ်၌ နန်းတက်သည်ဟုဆိုလိုသည်။NKJV ကျမ်းမူ ၆ရာ ၈:၁၆ တွင်မူ (၂၂)နှစ် အရွယ်၌ နန်းတက်သည် ဟုဆိုပြန်သည်။ (၂၂)နှစ်ပို ဖြစ်တန်ရာသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သူ့ဖခင်ကွယ်လွန်သည့် အသက်(၄၀)အရွယ်နှင့် ချင်ချိန်တါက်ချက်လျှင် ယုတ္တိပိုရှိသည်။ (၄၂)နှစ်ဆိုခြင်းမှာ စာကူးယူသူ၏ အမှားဖြစ်နိုင်ပါသည်။
၂၂(၂၄:၄- ၁၄)အလှူခံသေတ္တာကို တံခါးအပြင်ဘက်တွင်ထားရှိသည်ဟု ၂၄:၈တွင်ဆို၏။ ၄ရာ ၁၂:၉ တွင် ယဇ်ပလ္လင်ဘေးနားတွင် ထားရှိသည်ဟု ဆိုပြန်သည်။ အချို့ကျမ်းစာပညာရှင်ကြီးများကမှု သေတ္တာ(၂)လုံးထားရှိပြီး ဖြစ်မည်ဟု ယူဆကြသည်။ အချို့ကမူ သေတ္တာတလုံးတည်းဖြစ်၍ နှစ်နေရာစလုံးတွင် တလှည့်စီထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
၂၃(၂၄:၄-၁၄) အလှူခံငွေဖြင့် ဗိမာန်တော် အသုံးအဆောင်များ ပြုလုပ် ခြင်းမရှိကြောင်း ၄ရာ ၁၂:၁၃ တွင် ဆို၍ ၆ရာ ၂၄:၁၄တွင်မူ ပိုလျှံသော ငွေများဖြင့် ဗိမာန်တော် အသုံးအဆောင်များ ပြုလုပ်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ဓမ္မရာဇဝင် တတိယစောင်သည်အဆောက်အဦ:ဆောက်လုပ်သူများ ပေးခြေငွေကိုဆိုလို၍ ရာဇဝင်ချုပ်သည် အဆောက်အဦး ဘက်ဂျက်မှ ပိုငွေကိုဆိုလိုသည်။
၂၄(၂၄:၂၀-၂၇) ၂၄:၂၀ တွင်ဇာခရိကို ယောယဒ၏ သားဟုဆို၍ မ ၂၃:၂၅ တွင်ယေရှုက Berechiah ဗေရေခိ၏သား ဇာခရိဟုဆိုသည်။ ဇာခရိ ပရောဖက်ကျမ်စီရင်ရေးသားသူကလည်း ဇာ ၁:၁−၇တွင် Berechiah ဟု ဝန်ခံသည်။ ထို့ကြောင့် ဤသို့ရှင်းပြချင်သည်။ ၆ရာ ၂၄တွင်ပါရှိသည့် ဇာခရိသည် ယောယဒ၏မြေး Berechiahသားဖြစ်ပေမည်။ ဟေဗြဲဘာသာစကားတွင် မြေး၊မြစ်များကိုလည်း သားဟုခေါ်လေ့ရှိသည်။ ဇေခရိကျမ်းရေးသူကိုယ်တိုင်ကလည်း Brerchiah ၏သားဟုခံယူရေးသားထားသည်။ သို့သော် စဉ်းစားစရာတစ်ခုရှိသည် မှာ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် နာမည်တူမရှား ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။
၂၅(၂၈:၁-၄) အကယ်၍ အာခတ်မင်းသည် (၃၆)နှစ်အရွယ်တွင် သေလွန်လျှင် (၂၈:၁)(၁၁)နှစ်အရွယ်တွင် ဟေဇကိမင်းကိုမွေးဖွားရာရောက်မည် (၂၉:၁)။ သို့မဟုတ် အခြားအချက်အလက်များအရဆို လျှင် (၁၅)နှစ်အရွယ်တွင် မွေးဖွားခြင်းဖြစ်မည်။ အချို့ကမူ (၁၁)နှစ်သား နှင့် သားသမီးမထွန်းကားနိုင်။ (၁၅)နှစ်ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုကြသည်။ အချို့ကမူ ကျမ်းစာကူးယူသူ၏ မှားယွင်းကူးယူချက် ဟုဆိုကြသည်။ အချို့ကမူ ကျမ်းစာကူးယူသူ၏မှားယွင်းကူးယူချက်ဟုဆိုကြသည်။ ရိုးရိုးစင်းစင်း ဝန်ခံရလျှင် ရာဇဝင်ချုပ်ကျမ်းအရ အာခတ်မင်း၏ မွေးဖွား သက္ကရာဇ် ပြဿနာ မဖြေရှင်းနိုင်ပါ။
၂၆(၂၈:၁၆-၂၇)အာခတ်မင်း၏ အလောင်းကို ဘိုးဘေးများနှင့်အတူ သင်္ဂြိုဟ်ကြသော်လည်း တော်ဝင်မိသားစု သုဿန်တွင် သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းမပြုကြ။
၂၇(၃၂:၁-၈) G Cambell Morgan, Searchlights from the world.p.127.
၂၈(၃၅:၂၀-၂၄)ယောရှိသည် ယေရှုရှလင်၌ ကွယ်လွန်သည်ဟု ၃၅:၂၄ တွင်ဆို၍ ၄ရာ ၂၃:၂၉ တွင် မေဂိဒ္ဒေါ၌ သေသည်ဟုဆို၏။ ဓမ္မရာဇဝင် စာစောင်တွင် မေဂိဒ္ဒေါတွင် သေသည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ရာဇဝင်ချုပ်တွင်မှု နောက်ဆုံးအသက်ပျောက်သည့် ယေရှုရှလင်မြို့ကို အတည်ယူသည်။ လမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပွားသူ ဆေးရုံတွင် အသက်ပျောက်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ သာမန်အားဖြင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသော နေရာသည် အသက်မပျောက်သေးပါ။
၂၉(၃၅:၂၀-၂၄) John C. Whitcomb, Jr.,Solomon to Exile,p.141.
၃၀(၃၆:၉-၁၀) ယေဟောချိန်သည် အသက်(၈)နှစ်အရွယ်တွင် နန်းတက်သည်ဟု ငယ်၉တွင်ဆို၍ ၄ရာ ၂၄:၈ တွင် (၁၈)နှစ်၌နန်းတက်သည်ဟု ဆိုသည်။ အပိုဒ်ငယ် ၉သည် စာကူးယူမှားခြင်းသေချာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗာဗုလုန်သားများအား အညံ့ခံသည့်အချိန်တွင် ယေဟောချိန်၌ မယားများရှိနေသည်။ ထိုကာလသည်နန်းစံပြီး ဖင်မနွေးမီ တခဏသာရှိသေးသည် (၄ရာ ၂၄:၁၅)။ အချို့ဟေဗြဲကျမ်းမူ၊ Septuagint နှင့် Syrical ကျမ်းမူများတွင်(၁၈)နှစ်ဟုရေးထားကြသည်။